Bo-boolada jidhka ee Anti-ka goobta, fabriyada ee baahantaha ee u soo baahay - China Boeggeer
Waxaad halkan tihiin:Guri > Products > Security > Taah>Chainmail
Laakiinse caawimaad ah, oo la odhaneysaa siilad ah, lacagta lacagta ah, waxaa looga isticmaalaa qiimaha shaqaalaha la xiriirayo. Caadiga ah, xagaarka xisaabta uu ka sameeysaa birta aan dafsan. Inta markii marta, si uu uu baahan tahay macaamiilka, waxaan sidoo kale u sameynayaa xidhibka xarcooyinka ee ku saabsan. Sidoo kale, Dadka cusub ee la xiriirta ee goobta ee iska leh iyo xirfadda xirfadda biirka ee xirfadda ee xirfadda ah macaamiilku waxay u wargeliyaan ku jiraan. Caawimaadka chainmail waxaa inta badan ka sameysaa biyaha lacagta sare oo ah, kuwaas oo uu uu uu uu ka dhigtaa horeysaa. Sidaas daraaddeeda waxaa looga isticmaala caawimaad lacagta lacagta aqoonta ah.
SS jidhka goobta ee goobta ee goobta ah ee goobta ah
SS jidhka lacagta ee shirkada
IAkhaalka:Karbon salka, dabayl la'aanta, alumiinium, anodiisay, titanium, naasas, booban, baros.Xiriirka
IXiriirka xiriirka: U-gelinka, xarfadeeda iyo xadgelisa.
IWaxbarashada xiriirka: Yurub 4 ka mid ah 1.
IDaryeelka sare: Goobta shink, madowga madooban, shaqada kop.
ILacagta ah: XXS, XS, S, M, L, XL waxaa sidoo kale aqoonsan karaa.
1. Dadka soo celin.
2. Saddex bartood la yihiin qiimer.
3. Ood bartood ah, oo dhererka.
4. La siibsan karaa shan farmo ee la xiriirta badbaadada ah iyo dhererka lacagta.
IIsku sii u dhaqsan:Polypropylene, nailon, salka la'aanta ah ama waxaa laga habboon kara.
IMidib dhagaxada: Cad, ee gaar ah, cagaar, buluu, bool, bool ah, xiraab ah.
ISii xirfadda ee iskuulka:Badbaadid.
IMacluumaad dheeraadka: La xiriirta dadyada iyo wabayeyd.
SS Chainmail gaarkeeda la xidhiidha
L hantiyaasha guriga iyo guri.Waxyaabaha ee dabiid ah ee dabiiga
Waana xoog badan iyo dhismo adag ah.
Hantooyinka ee fudud ah.
Waxaan ku saabsan u dhaqaalay.
Ee uu xisaa.
Waxaan doortooyinka ah.
SS jidhka uu kugu habboonaa diiwaanka ee dhinacada
SS jidhka ee kugu habboon guriga laayada
Wax ka baaraandegeeda xirfadda.
I imtixaanka laabooyinka.
Horey:Mashiin xirfadda bib
Ka dambe :Cidhibka ee la'aanta ee la'aaneysa
Maseysiinta xirfadda xirfadda ah
Soo-talinkaCaawimaada:1. Soo-talinta shiftiiCaawimaadka chainmail waxaa u qeybsadaa ee ku jeedaa, goobta, dhibta ah. Caawimaad lacagta ah waxaa laga goobahaa oo lagu jeeysaa duduha kala duduha ah, sal...
Daryeelka ee ciyaamooyinka ee la xiriirta
Gacanta waxaa aad adag u dhigtaa in lacagta lacagta lacagta, gacanta wuxuu u sameyn yahay caawimaad.Gaalooyinka aawadeedka ka sareysaa xirfadeedka caadiga ah iyo shaqaalaha la xiriira, kuwaasoo ka dhi...
Xumaanta sharciga ee ciyaamooyinka sirinta ah ah
Shaqada boqolkaWaa alaab ah oo u badbaadin gacmaha dadka. Xagaaga kala duwan waxaa ku yaal shaqaalaha badbaado kala duwan, sidaas daraaddeed waxaa looga isticmaalaa xeedaha kala duduwan. Markii aad do...